Seranana lehibe ho an'ny fararano sy ririnina Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Lanitra fanodinana alim-bary misy rindrina
Lanitra fanitso avy amin'ny Arivo arivo sy iray alina
Fanaovana latabatra vita haingon-trano manana toetra manokana manokana. Amin'ny fahavaratra dia mamirapiratra eo ambonin'ny teratany ao amin'ny mpifanila trano mafana, amin'ny fararano sy ny ririnina dia manamboatra ny tranontsika na latabatra fanasana, na dia tsy misy rivotra aza.
Rivo-doza amin'ny fararano amin'ny endriny
Mazava ho azy, jereo latabatra vita haingon-trano Amin'ny fararano sy ny ririnina dia toy ny fananganana ivelan'ny varavarana, ohatra, eo am-baravarana, lehibe. Ny tsara indrindra dia ny hoe mora, iray Hanamboatra lanjany anaoka ny ankizy aza dia afaka mankafy azy io ary mitarika vokatra mahagaga tsy misy fahalalana. Raha tsy manosika azy izany ...
Ny Windlichter dia misaina fotsiny
Fanaovana latabatra vita haingon-trano ho an'ny fahalavoana
Ho an'ny iray Ny hazavan'ny rivotra any an-trano Raha vantany vao misy lasitra mety ho an'ny labozia. Raha fitaovana lehibe kokoa, dia azonao ampiasaina ny fitahirizana tavoahangy. Mazava ho azy, izy ireo ihany koa dia misy amin'ny haben'izy ireo samihafa. Na dia ny jiro iray aza dia afaka manompo tsara.
Mahafinaritra foana raha tsy iray fotsiny ianao fehiloha vita tanana ampiasaina amin'ny famolavolana, fa farafahakeliny karazana mitovy amin'ny latabatra na eo amin'ny varavarankely.
Satria ny labozia dia teantira na - miankina amin'ny haben'ilay fitaratra - na dia kely fotsiny aza ny labozia.
Ho an'ny gilaalan'ny lohataona dia mila ravina simika feno maple & co. Tokony hosasana andro vitsivitsy mialoha izany. Azonao atao koa ny mamehy azy ireo amin'ny tady tsotra manitra manodidina ny fitaratra. Kanefa mitandrema: azafady azafady fa ny ravina maina dia tsy afaka mifandray amin'ny jiro labozia.
Amin'izany fomba izany dia azonao atao ihany koa ny mampitsahatra ny vanim-potoana hafa eo amin'ny fitaratra. Kintana karakaraky ny ririnina amin'ny ririnina, ravina maina sy ahitra amin'ny lohataona sy fahavaratra. Ny zavatra tsara dia ny toy izany fehiloha vita tanana saika vola be!
Mazava ho azy fa mila labozia sy vera ihany koa ianao. Ankoatra izany, mila toromarika sy traikefa koa ianao. Tsara ao amin'ny tapetenkleistermethode mijery kely vera kely, izay nofonosinao tamin'ny tarika madinika, ohatra, teo amin'ny fitoeran-tsakafo Krismasy.
Avy amin'ny taratasy fanadihadiana ho an'ny homemade tealight Ny ririnin'ny ririnina toy ny voninkazo manaloka, kintana na hazo fihinam-bary no fongana. Ireo dia avy eo miorina amin'ny seza na ovaina (tsara, raha manapaka kintana na tsiro fotsiny, ohatra) miaraka amin'ny rakitra mipetaka eo amin'ny fitaratra.
Na dia ny ankizy madininy aza dia afaka mandrehitra sombin-tsipika na sombiny fotsiny amin'ny taratasy. Azonao atao ny manome loko mifanaraka amin'ny Noely. Ary raha tokony ho marevaka izy, dia jiro fotsiny amin'ny rivotra rehetra!
Raha tsy te hanamboatra labozia avy amin'ny fitaratra ianao, dia afaka miasa koa amin'ny taratasy parchment. Na izany aza, sarotra loatra amin'ny ankizy kely izany. Eto ianao dia mila labiera vita amin'ny labiera, sary miloko volomparasy, taratasy parchment ary vato manjelanjelatra. Mazava ho azy, mazava ho azy, ny hety, ny lakaoly ary ny teakights.
Ny mofomamy amin'ny fararano - mofo apples sy mofines
Pejy fandravahana fararano
Tranom-bokatra amin'ny lohataona
Pejy fanolorana ririnina
Sarin'ny pejy fandokoana vonjimaika amin'ny ririnina
Pejy voromailala Voir d'autres personnes slt
Pejy sehatry ny ririnina